China Brass radiator valvụ ndị na-emepụta na ndị na-ebubata |Xinfan
Eriri Njikọ Actuator: M30X1.5
Akwụkwọ ikike: afọ 2 Nọmba nlereanya: XF60619A/XF60618A
Aha ika: ỤFLY Ụdị: Sistemụ kpo oku ala
MOQ: 1000 Okwu: valvụ okpomọkụ
Ngwa: Ụlọ Agba: Nickel gbazere
Ụdị imewe: Oge a Nha: 1/2"
Ebe amụrụ: Zhejiang, China Aha: Brass radiator valve
Ọrụ mgbe erechara: Nkwado nka na ntanetị
Ike Ngwọta Brass Project: Eserese eserese, imewe ụdị 3D, ngụkọta ihe ngwọta maka Projects, Cross Categories Consolidation
Brass Hpb57-3 (Nabata ihe ọla kọpa ndị ọzọ na ndị ahịa akọwapụtara, dị ka Hpb58-2,Hpb59-1,CW617N,CW603N na ndị ọzọ)
Akụrụngwa, Njikere, Roughcast, Slinging, CNC Machining, Nyocha, Nlegharị Ule, Mgbakọ, Ụlọ nkwakọba ihe, Mbupu
A na-eji valvụ nkwụghachi mmiri nke radiator na-achịkwa mmiri nke radiator na-arụ ọrụ na nhazi na ịkpụpụ.nkwụghachi mmiri nguzozi.the radiator flow.Nke a usoro okpomọkụ akara valve nkwonkwo hydraulic akara ọhụrụ, na radiator njikọ na-enweghị iji ọzọ akara ihe, rụrụ nkwonkwo na roba akara nwere ike ekwe nkwa ngwa ngwa, ntụkwasị obi na Multiple nrụnye.
A na-eji igwe anaghị agba nchara ma jiri akara mgbanaka EPDM nke Italian butere okpukpu abụọ.
A na-ejikọta valvụ njikwa okpomọkụ ntuziaka na valvụ ahụ site na extrusion, nke nwere uru ndị a ma e jiri ya tụnyere kposara nkịtị:
Aka agaghị atọpụ mgbe ị na-atụgharị ihe nkedo.
Ngbanwe nke isi valve dị mma.
2.Rubber akara rụrụ nkwonkwo
Njikọ rụrụ arụ nke eriri mpụga nke akụkụ jikọtara na radiator.Inwe akara rọba nke ya, ọ nweghị ihe mkpuchi ọzọ, ọ nwekwara ezigbo akara na radiator.Enwere ike ịgbasa ya ma gbakọta ya ọtụtụ oge ma dị mfe iji rụọ ọrụ.Akụkụ aka aka ejiri okirikiri okirikiri na O-ring.Dị ka naanị iji metal soft seal sppherical seal, ọ nwere ike hụ na ya hydraulic sealing arụmọrụ mgbe otutu disassembly.
Nke gara aga: valvụ bọọlụ ọla nwere nlele
Osote: valvụ njikwa okpomọkụ ọla
Na-edozi Valves Radiator
Valve Radiator Nickeled
valvụ kpo oku XF60660A XF60668